पछि पारिएको समाज छनौट गरी हामीले नमुना सञ्चार ग्राम अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ – अध्यक्ष गोपीनाथ खरेल
By vijayafm on	 August 25, 2018 अन्तरवार्ता, नमुना ग्राम सञ्चार अभियान, विजय परिवार, विविध खबर, स्थानीय
गोपीनाथ खरेल ,अध्यक्ष, विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्था लिमिटेड
सामुदायिक रेडियो विजय एफएम १०१.६ को १४ वर्षको उपलब्धि के हो ?
मध्य नेपालमा एउटा अलग पहिचान बनाएको छ । प्रत्येक श्रोता आफन्तहरुको साथी बनेको छ । संस्था आन्तरिकरुपमा भौतिक संरचना, आधुनिक प्रशारण, मेसिनरी तथा साम्रगीहरु र जनक्ति सबै सबल बनिसकेको छ । यसरी छोटकरीमा भन्दा संस्था सामाजिकरुपमा श्रोता आफन्त माझ संरचनागत गरी आन्तरिक र बाÞयरुपमा धेरै नै सबल भइसकेको छ ।
यसको आगामी लक्ष्य के छ ?
आज श्रोताहरुका प्राथमिकताहरु, समाज परिर्वतनका मोडहरु तथा देशको र समाजको परिस्थिति रेडियो सुन्ने माध्यम दिनदिनै परिवर्तन भइरहेका छन् । समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सकेनौँ र आवश्यकता पहिचान नगरी अगाडि बढेनौँ भने हामी पछाडि पर्नेछाँै । आज प्रत्येक व्यक्तिका हातमा मोबाइल छ । देश र दुनियाँको प्रत्येक परिर्वतन तथा खबरहरु ठाउँका ठाउँ सेकेन्डमै थाहा पाउन सक्छन् । अबको हाम्रो लक्ष्य भनेको मोबाइल फ्रेन्डली एफएमहरु विकास गर्ने सोसल मिडियाहरुको विकाससँगै आपूmलाई पनि विकास गर्ने त्यसमार्फत सबैतर्फका श्रोता तथा आफन्तहरुलाई सुहाउँदा र हितकर हुने अझ स्तरीय कार्यक्रमहरु पस्कनु हुनेछ ।
धेरै सञ्चार माध्यमका भीडमा यसलाई भिन्न सञ्चार माध्यमका रुपमा कसरी अघि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ ?
सञ्चार माध्यमका रुपमा एक हिसाबले हामी अघि बढि सकेका छौँ । पहिलो त वास्तविक सहकारिताको अवधारणाअनुसार समान परिवर्तनको मुख्य लक्ष्य हामीले अपनाएका छौं । यो विशुद्ध गैर नाफामूलक संस्था हो । हामी हाम्रो समाज र आजको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी कार्यक्रम उत्पादन र प्रसारण गर्दछौँ । सहकारिताको अवधारणाअनुसार यस क्षेत्रका धेरै संघसंस्थाहरु जस्तै शिक्षण संस्था, गैंडाकोट क्षेत्रको वन, खानेपानी, व्यापारिक संघसंस्था, विभिन्न विधाका सहकारीहरु, स्थानीय निकायहरुसँग संयुक्तरुपमा सोही क्षेत्रका कार्यक्रमहरु उत्पादन र प्रसारण गरी आफ्नो अलग पहिचान बनाएका छौ । हामीले आगामी दिनमा अझ बढी समुदायस्तरमा त्यहाँका समस्या र चुनौतीहरु पहिचान विश्लेषण गरेर सोहीअनुसार कार्यक्रमहरु प्रसारण गर्नेछौँ । हाम्रा श्रोता तथा आफन्तहरुको रुचि, आवश्यकता र उहाँहरुका थप जागरण ल्याउने सवालका कार्यक्रममार्फत हाम्रो फरकपनलाई अझ बढी परिस्कृत गर्दै लैजाने छाँै ।
स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र गरी विभाजित राज्य संरचनामा विजय एफएमको भूमिका के हुन्छ ?
देश संघीयतामा गइसकेको छ र यसको अभ्यास भर्खर सुरु भएको छ । थुप्रै समस्याहरु देखिएका छन् । अवसरहरु पनि छन् । राज्यले यसलाई कसरी व्यपस्थापन गर्छ अझै केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने देखिन्छ । रह्यो हाम्रो कुरा । धेरै कुरामा हामीले समस्यालाई परिर्वतन गर्न अग्रसर हुनुपर्नेछ भने केही कुरामा आपूmलाई पनि परिवर्तन गर्नु छ । संघीय राज्यको ऐन, कानुन, सञ्चालन कार्यविधि आदि बन्ने क्रममा छन् । राज्यको संविधान ऐन, कानुनहरु स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय राज्यले अवलम्बन गरेका कार्यविधिहरु सही, सत्य रुपमा जनतासमक्ष पु¥याउनु र जनताको उपेक्षा, चाहना, समस्या तथा राज्य संचालनका क्रममा त्यहाँ परेका राम्रा ÷नराम्रा असरहरु राज्यसमक्ष पु¥याउनु एउटा पुलको काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । हामी स्थानीय स्तरमा सञ्चालित र प्रादेशिक सञ्चार माध्यममा विकास हँुदै गरेकाले मूलतः हाम्रा उत्पादन र प्रसारणहरु स्थानीय तहहरुसँग र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित हुनेछन् । हाम्रा कार्यक्रम प्राथमिकतामा पहिला स्थानीय तहहरु, दोस्रो प्रादेशिक, तेस्रो संघीय राज्य र चौथो अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पर्ने छ ।
जनउत्तरदायी बनाउन के कस्ता कार्यक्रम गर्दै हुनुहुन्छ ?
मैले माथि भनिसकेँ, हामी समाजका प्रत्येक तह र संघसंस्था तथा व्यक्तिहरुसँग सहकार्य गरी सोही विषयसँग सम्बन्धित रहेर कार्यक्रमहरु उत्पादन र प्रसारण गर्नेछौँ । हाम्रो सामाजिक दायित्वलाई मनन गरी स्थानीय तहहरुसँग सहकार्य गर्नेछाँै । त्यहाँका समस्या पहिचान गरी सम्बन्धित निकायसँग समाधानका लागि पहल गर्नेछौँ । निरन्तर फलोविङ गर्ने गरी अझ बढी स्फेसिफिक भएर यस वर्षदेखि एउटा पछि पारिएको समाज छनौट गरी हामीले नमुना सञ्चार ग्राम अभियान सञ्चालन गर्नेछौँ । यसवर्ष हामीले गैंडाकोट वार्ड नम्बर ३ लाई नोट गरेका छौँ ।
प्रादेशिक रुपमा अघि बढ्ने योजना कसरी मूर्त रुप पाउँछ ?
हामीले एफएमको सञ्चालक संस्था विजय सामुदायिक सूचना तथा सञ्चार सहकारी संस्थालाई प्रादेशिक संचार गृहका रुपमा विकास गरिरहेका छौँ । यसका लागि रेडियोको प्रसारण क्षमता र गुणस्तरमा अझ बढ्दो गरी गण्डकी प्रदेशका प्राय सबै जिल्लामा प्रदेश ३ का चितवन, धादिङ, मकवानपुर र प्रदेश ५ का नवलपरासी (पश्चिम) रुपन्देही, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची लगायतका जिल्लाहरुमा पूर्णरुपमा सुन्न सकिने बनाइने छ । साप्ताहिक खबर पत्रिकालाई अझ बढी गुणस्तरीय बनाउदै दैनिक रुपमा प्रकाशन गरिने छ र आसपासका कम्तीमा ५ वटा जिल्लामा पु¥याइने छ । हामी टेलिभिजन पनि सञ्चालन गर्ने सोचमा छौं र यो अवस्थासम्म पु¥याउन विजय एफएम १०१.६ लाई अटुट माया गरी श्रवण गर्ने सम्पूर्ण श्रोता आफन्त, हामीसँग सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण संघसंस्थाहरु, विजय परिवार, विज्ञापन दाता, सेयर सदस्यज्यूहरु कार्य समिति तथा विभिन्न उपसमितिमा रहेर काम गर्ने साथीहरु र आफ्ना व्यक्तिगत समस्या र सपनाहरुलाई सम्पूर्णरुपमा रेडियोको भविष्यसँग जोडेर अहोरात्र कार्य गर्ने कर्मचारी तथा पत्रकार साथीहरुलाई १५ औं वार्षिक उत्सबको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाइ दिँदै निरन्तर साथका लागि आभार व्यक्त गर्दछु ।